Nhau - Zvakanakira mwenje wezuva
Zvakanakira zvemagetsi ezuva remumugwagwa
Kushandiswa kwesimba rezuva rekuvhenekera mumigwagwa kuri kuita mukurumbira zuva nezuva.Sei magetsi emagetsi ezuva achikwanisa kukura nekukurumidza?Ndezvipi zvakanakira zvichienzaniswa nemarambi emumugwagwa akajairwa?
Powered by solar panels,magetsi ezuvaanosimudzirwa magetsi usiku uye anogona kuiswa chero kupi nechiedza chezuva chakakwana.Kuva ane ushamwari nemhoteredzo, hakumbosvibisi mhoteredzo.Zvikamu zvebhatiri zvakabatanidzwa mudanda pachayo, zvichiita kuti mhepo irambe yakasimba.Smart kuchaja uye kuburitsa uye microcomputer light-and-time-control tekinoroji inogamuchirwa.Yakagadzirwa ne-high-effective lighting source, magetsi ezuva remumugwagwa anoratidzwa nekupenya kwepamusoro, kuiswa nyore, kushanda kwakagadzikana uye kwakavimbika, pasina tambo yakaiswa, kushandiswa kwesimba risina simba, uye hupenyu hurefu hwebasa remaawa angangoita 50,000.
Mabhenefiti ekushandiswa kwesimba rezuva
1. Simba rezuva ndiro simba rinodzokororwa resimba rinogara uye risingagumi zvachose.Simba rezuva rinogashirwa nePasi rinogona kusangana nekagumi resimba rinodiwa pasi rose.Tinogona kugutsa zvinodiwa nemagetsi epasi rose nekuisa solar photovoltaic masisitimu muzvikamu zvina kubva muzana zvemagwenga enyika.Simba reSolar rakachengeteka uye rakavimbika nekuti harina njodzi kumatambudziko emagetsi kana kusagadzikana kwemusika wemafuta.
2. Simba reSolar rinowanikwa kwese kwese, saka hatifanire kuritumira madaro marefu, tichinzvenga kurasikirwa kwetambo dzemafaro akareba.
3. Simba reSolar rine mari shoma yekushandisa nekuti harishandisi mafuta.
4. Hapana zvikamu zvinofambiswa zviri mumagetsi ezuva, izvo zvinoderedza kukanganisa uye zvinoziva kugadzirisa nyore, kunyanya zvakakodzera kushanda kusina kutarisirwa.
5. Serudzi rwesimba rakachena rakakodzera, kugadzirwa kwesimba rezuva hakuburitse tsvina, kusvibiswa kwemhepo, ruzha kana chero imwe njodzi yeruzhinji, uye haikanganisi zvakatipoteredza.
Zviwanikwa zvepasi zviri kuramba zvichiderera, zvichiita kuti zvishoma nezvishoma zviwedzere mari yekushandisa simba.Kuti tigadzirise kuchengetedzwa kwese uye njodzi dzekusvibiswa, tiri kubatanidza kukosha kukuru kune simba rezuva, simba idzva rakachengeteka uye zvakatipoteredza.Zvichakadaro, kusimudzira uye kufambira mberi kwe solar photovoltaic tekinoroji inotungamira mukusimba kwakasimba kwesimba rezuva mumwenje wemugwagwa.
Zvimiro zvemagetsi ezuva
1. Kuchengetedza simba: Photovoltaic solar energy inowanikwa nekushandura chiedza chezuva kuva magetsi uye haiperi.
2. Kuchengetedzwa kwemhoteredzo: Haibudisi kusvibiswa, hapana ruzha, hapana mwaranzi.
3. Chengetedzo: Kuvhunduka kwemagetsi, moto uye dzimwe tsaona hazvimboitika.
4. Yakanaka: Inogona kuiswa nenzira yakapfava, iyo inoda kuti hapana mitsetse yakagadzirwa kana kuchera kuvaka.Vanhu havachazvinetsekizve pamusoro pokudzima kwemagetsi kana kuti kuganhurirwa kwemagetsi.
5. Hupenyu hurefu hwebasa: Nehuwandu hwetekinoroji, yakashongedzerwa neyepasi rose brand control system iyo yakagadzirwa nehungwaru uye ine yakavimbika mhando.